64 Kọfị Kwuru maka Caffeine Enthusiasts - Nri
64 Kọfị Kwuru na caffeine na-anụ ọkụ n'obi ga-enweta kpamkpam
64 Coffee Sayings That Caffeine Enthusiasts Will Totally Get
Anyị ịhụnanya kọfị. Ma obughi na na, oh n'ezie, a ga m enwe iko udi nke uzo. Maka anyị kọfị aficionados, iko steam nke Joe bụ ihe na-ebili anyị n'ụtụtụ. N'ezie, anyị hụrụ ihe ndị ahụ n'anya nke ukwuu nke anyị nwere kọfị ndenye aha nyefere n'ọnụ ụzọ anyị kwa ọnwa na ọbụna rịọ onyinye kọfị maka ezumike na ụbọchị ọmụmụ. Heck, anyị achọtala ụzọ esi nri na kọfị . Ma maa gịnị? Anyị anọghị naanị anyị. Elixir anwansi a na-etinye pep na nzọụkwụ nke ihe niile banyere ọtụtụ narị afọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịkọ na ịchọrọ ịmata ụdị ịhụnanya nke ụtụtụ gị (ma eleghị anya n'ehihie) na-enweta n'etiti ndị mmadụ na-abụghị ndị nkịtị, lelee nchịkọta kọfị anyị-okwu ndị a sitere n'aka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị na-ese ihe, na oge a celebs kụrụ ntu ahụ n'isi. Nkà ihe ọmụma na mmụọ nke na-esote ga-emerịrị gị ozugbo ... mana ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, ọ ga-abụ na percolator gị ga-eme ya.
Njikọ: Kacha mma ụlọ oriri na ọOREụ COụ kọfị — dị
1. Enweghị kọfị ụtụtụ m, adị m ka mpekere ewu mịrị amị. - Johann Sebastian Bach
2. Kọfị bụ ihe ọ beụ thatụ na-eme ka mmadụ hie ụra mgbe ọ naghị a drankụ. - Alphonse Allais
3. Nke bu eziokwu bu, amaghi m ebe echiche m si bia, odighi onye edemede obula. Nanị ezigbo azịza bụ ị toụ nnukwu kọfị ma zụrụ onwe gị tebụl na-adịghị ada ada mgbe ị na-akụ isi gị megide ya. - Douglas Adams
4. Ahụrụ m kọfị n'anya n'ihi na ọ na-enye m nro ka m wee mụrụ anya. - Lewis Nwa
5. Kọfị bụ asụsụ n’onwe ya. - Jackie Chan
6. Decaf kọfị na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ị tụbara ya ndị mmadụ. - Amaghị aha
7. Kọfị mbụ. Atụmatụ Mgbe e mesịrị. - Leanna Renee Hieber
8. Enweghị m ike ịkwụsị ị theụ kọfị, akwụsịrị m ị coffeeụ kọfị, akwụsịrị m iguzo, na ịgagharị, yana itinye okwu na-etinye okwu. - Lorelai Gilmore, Girlsmụ nwanyị Gilmore
9. Eji m ngaji kọfị tụrụ ndụ m. - TS Eliot
10. Egwuregwu ị drinkingụ mmanya kasị dị ize ndụ bụ ịhụ ogologo oge m ga-aga na-enweghị kọfị. —Anaghị aha
11. Caffeine na shuga, ndi otu ihe oriri abuo. - Laurell K. Hamilton
12. Gini mere, ee, enwere m ike bido ụbọchị m n’enweghi kọfị. Ma, ọ na-amasị m inwe ike icheta ihe dịka esi ekwu okwu ma tinye uwe ogologo ọkpa. - Nanea Hoffman
13. Bere a nnuruyɛfo de nnuru a ekum yare mmoawa di dwuma no, nhwehwɛmu bɛn na wɔde mae? - Cassandra Clare
14. Onye mgbakọ na mwepụ bụ akụrụngwa iji gbanye kọfị ka ọ bụrụ usoro iwu. - Paul Erdős
15. Nke a abụghị ụtụtụ tii ụtụtụ. Nke a bụ ụtụtụ kọfị. - Lorelai Gilmore, Girlsmụ nwanyị Gilmore
16. Kọfị karịrị akarị mmanya; ọ bụ ihe na-eme. Ọ bụghị dị ka hip, kama dị ka ihe omume, ebe ị ga-abụ, ma ọ bụghị dịka ọnọdụ, kama dịka ebe n'ime onwe gị. Ọ na-enye gị oge, mana ọ bụghị ezigbo oge ma ọ bụ nkeji, mana ohere ịbụ, dị ka onwe gị, ma nwee iko nke abụọ. - Gertrude Stein
17. Onwu na-ada nkiti nwayo nwayo. - Amaghị aha
18. Kedu ihe na-aga nke ọma na iko kọfị? Iko ọzọ. - Henry Rollins
19. Achọrọ m ị coffeeụ kọfị karịa ịja mma ugbu a. - Louisa Mee Alcott
20. Duzu ati a ɔwɔ kɛ mgbanyima ne mɔ bahola amaa azɛlɛ ye azo ɛ? - Jean Kerr
21. Dị ka ọtụtụ ndị bi n’ụwa m na-a intoụ kọfị, mana n’ụzọ kwesịrị ekwesị ma dị mkpa. Oge izu ụka m ga - ebido kọfị kọfị. - Jimmy Carr
22. Oge ụfọdụ, m n’efe ọtụtụ awa n’ebughi ị drinkingụ kọfị ... a na-akpọ ya ihi ụra. —Anaghị aha
23. Mana obughi iko kọfị dị mma karịa enweghị kọfị ọlị. - David Lynch
24. Ana m ekpe ụlọ oriri na ọ restaurantụ judgeụ dị n'akụkụ achịcha na kọfị. - Burt Lancaster
25. Ka kọfị gị sie ike, Mọnde gị adị mkpụmkpụ. - Amaghị aha
26. Ọ dịghị mkpa ebe ị si ma ọ bụ otu ọ dị gị n’obi, udo dị mgbe niile na iko kọfị siri ike. - Gabriel Bá
27. Amaghị m ihe m ga - eme ma ọnweghị kọfị — m na - eche na eleghị anya 25 ruo ndụ. - Amaghị aha
28. Sayensị enweghị ike iwepụta usoro nkwukọrịta ọfịs dị mma karịa agbaji kọfị. - Earl Wilson
29. Achọrọ m kọfị m dịka m masịrị onwe m: ike, dị ụtọ, na ekpo oke ọkụ maka gị. - Jac Vanek
30. N'azụ nwanyị ọ bụla na-aga nke ọma, enwere nnukwu kọfị. - Stephanie Piro
31. N’ebe m nọ, ọ ofụ kọfị emere ọhụrụ bụ otu n’ime ọrụ ọhụụ. - Hugh Jackman
32. A ga m ebido ịrụ ọrụ mgbe kọfị m ga-eme. - Amaghị aha
33. Kọfị bụ ụzọ e si ezu ohi oge kwesịrị site n'ikike dịịrị nke okenye gị. - Terry Pratchett, Thud!
34. Kọfị kọfị dị ka nwamba na-enweghị ntutu isi-ọ dị, mana nke ahụ anaghị eme ka ọ dị mma. - Amaghị aha
35. Ike uche uche nwoke dabara na oke kọfị ọ na-a drinksụ. - Sir James Mackintosh
36. Ime ezi ọrụ mmadụ ga-eri ezigbo nri, nọrọ n’ụlọ nke ọma, nwee efe ọ na-efe site n’oge ruo n’oge, see anwụrụ, ma coffeeụọ kọfị n’udo. - Vincent Van Gogh
37. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka kọfị, enweghị m njirimara ọ bụla amata ọ bụla. - David Letterman
38. Anyi choro otutu ihe; anyị anọghị n'ụdị dị ukwuu. Anyị edeghị ezigbo ụra abalị. Anyị nwere nkụda mmụọ. Kọfị na-edozi nsogbu ndị a niile n'otu obere iko dị ụtọ. —Jerry Seinfeld
39. Adịghị m otu n’ime ndị na-eteta ụra ma na-eche, ‘Bịa n’ụbọchị!’ Aghaghị m ịnwe ihe dịka pint kọfị 7 tupu m teta ụra. - Stacy London
40. Ọ bụ adịghị mma, n’echiche m, ịmanye ndị nwere ezigbo ọgwụ maka kọfị ka ha chere n’ahịrị n’azụ ndị o doro anya na ha bụ ụdị ihe egwuregwu. - Dave Barry
41. Ozugbo i biliri wee nụ isi kọfị, ọ na-esiri gị ike ịlaghachi ụra. - Fran Drescher
42. Otu akpa kọfị kwa iko mmiri, nri? - Christopher, Girlsmụ nwanyị Gilmore
43. Ana m amanye ndị mmadụ ka ha soro m aụọ kọfị, naanị n'ihi na anaghị m atụkwasị mmekọrịta mkwado obi na-enweghị isi ọzọ ike na-abụghị kọmputa ma ọ bụ igwe ekwentị. - John Cusack
44. Agbaghara kọfị. Ọ fọrọ nke nta ka ọ dị njọ karịa ịhapụ onye hụrụ n'anya. - Sandra Bullock
45. Mgbe gị na mmadụ na-eme njem, were ezigbo ndidi na ndidi were kọfị ụtụtụ gị. - Helen Hayes
46. ​​Oge ụfọdụ a na m anụ ka gravel, mgbe ụfọdụ a na m anụ ka kọfị na ude. - Nina Simone
47. Mgbe ndu nyere gị lemọn, gbanwere ha kọfị. - Amaghị aha
48. Ebe amụrụ m bụ agwa kọfị. - Amaghị aha
49. can’tnweghi ike inwe ezigbo nri nri n’enweghị ezigbo kọfị mara mma: ihe abụọ ahụ na-etolite ọnụ. - Adam Gopnik
50. Ka kọfị gị gbanye tupu eziokwu emee. - Amaghị aha
54. Onye obula kwesiri ikwere n’ihe. Ekwere m na m ga-a haveụ kọfị ọzọ. - Amaghị aha
57. Nke ahụ bụ ihe na-akpasu m mmụọ iwe-m na-ekwu ma ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu kọfị niile dị njikere ma ọ bụghị. - JD Salinger, Nkata na Rye
52. Etinyere m kọfị n’ọkụ n’ezi ngwa microwave ma ọ fọrọ nke nta ka ọ laghachi n’oge. - Steven Wright
56. Ọ ga-akara m mma ịta ahụhụ kọfị karịa ịbụ onye nzuzu. - Napoleon Bonaparte
55. I kwesịrị ịma na, tupu elekere iri nke ụtụtụ, agbanyeghị ajụjụ ọ bụ, azịza m bụ kọfị. - Amaghị aha
53. Na-enweghị kọfị, ọ nweghị ihe ọ bụla na-ede. Oge. - Nancy Kress
59. Njegharị n’ime ndụ dị mma. Agbanwe agbanwe na kọfị ka mma. - Justina Headley
61. Arọrọ m nrọ; ha bụ igwe ojii na kọfị m. - Carly Simon
58. coffeeụọ kọfị. Mee nzuzu ihe ọbụna ngwa ngwa na ọzọ ike. - Amaghị aha
60. Omenaala anyi n’etu kọfị na mmanụ ụgbọala, nke mbụ na-atọ ka nke abụọ. —Edward Abbey
63. Ihe ọ bụla na ndụ m nwere ihe ọ nwere ị were kọfị. Ekwenyere m na ndụ mbụ, m bụ kọfị? - Lorelai Gilmore, Girlsmụ nwanyị Gilmore
62. Apụrụ m inye kọfị n’azụ m jiri azu. - Jennifer Lopez
64. Ezi nkwukọrịta dị ka ihe dị egwu dị ka kọfị kọfị, ọ na-esikwa ike ịrahụ ụra mgbe emechara. - Anne Morrow Lindbergh
Njikọ: Okwu 31 na-egosi na nri ahụ bụ ndụ
ọchị na-ekwu okwu maka alụmdi na nwunye
na-egosi dị ka iti ihe ọjọọ
bekee nke ihunanya movies 2016
abịa afọ fim